एनआई सी एशिया बैंककाे जलजलागाउँपालिका ३ वारीवेनीमा नयाँ शाखा विस्तार - YesKathmandu.com
एनआई सी एशिया बैंककाे जलजलागाउँपालिका ३ वारीवेनीमा नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । एनआई सी एशिया बैंकले पर्वतको जलजलागाउँपालिका ३ वारीवेनीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । जलजलागाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले माघ २१ गते एक भव्य समारोहकाबीच नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेका थिए ।
२०७५ वैशाख १९ गतेबाट कारोबार सुरु भएको यस शाखाको उद्घाटन समारोहमा मल्लले दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमासमेत आफ्नो उपस्थिति सबल बनाउँदै गएको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकको प्रशंसा गरेका थिए।
बैंकलाई आमजनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर २७५ शाखाकार्यालयहरु, २८९ एटिएम, ३९ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एव्ं २३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रदानगर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जालभएको बैंक हुन सफलभएको छ ।
बैंकको वासलातको आकार रू. २१८ अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने कुलनिक्षेप करिब रू. १७५ अर्ब तथाकर्जा रू. १४९ अर्ब पुगेको छ । एनआईसी एसियाले निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकहरुमध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंकको रुपमा आफ्नो पहिचानबनाउन सफल भइसकेको छ । हालसम्म यस बैंकमाग्राहकको संख्याकरिब १४ लाख ५० हजार रहेको छ ।
साथै संस्थागत सुशासन, जोखिमव्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालनागर्दै आएको छ । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमाआफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखाकार्यालय संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।